Sawirro:Ciidamada Ciraaq oo Si Xun Loogu Jebiyay Dagaal Ka Dhacay Magaalada Tikriit.
Wednesday July 16, 2014 - 09:24:58 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada xukuumadda dabadhilifka almaaliki ay ku fashilmeen isku day ay ku doonayeen in ay markale dib ugu qabsadaan magaalada xarunta u ah gobolka salaaxudiin ee Tikriit.
Dagaalka oo muddo saacada ah qaatay ayaa shalay ka dhacay hareeraha magaalada,ciidamada mujaahidiinta dowladda islaamiga ah ayaa ku guuleystay in cadawga shiicada ah dhabarka ka jabiyaan ugu dambeyntiina ku qasbay in uu dib uga gurto magaalada.
Warbaahinta gudaha ciraaq ayaa xaqiijisay in ciidamada cadawga si xun loogu jebiyay magaalada Tikriit kadibna ay dhanka magaalada samara dib ugusoo gurteen.
istish-haadiga abuu Cukaasha al-liibi ayaa isagoo kaxaynayay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay wuxuu camaliyad istish-haadi ah ku galay boqolaal katirsan maleeshiyaadka shiicada waxaana halkaasi looga dilay inkabadan 40 askari.
Wararku waxay intaasi ku darayaan magaalada tikriit laga nadiifiyay ciidamada xukuumadda Al Maaliki,sawirro ay baahisay wilaayada salaaxudiin waxay muujinayeen gummaad ba’an oo cadawga ka gaaray dagaalkii shalay.
Meydadka cadawga ayaa waddooyinka daadsanaa halka gaadiidka gaashaman ee shiicada oo mujaahidiintu qabsadeen iyo kuwa ay gubeen gudaha magaalada lagu arkayay.